Kugovaniswa kwakanyanya kweGNU / Linux kwe2019 | Linux Vakapindwa muropa
Kugovaniswa kwakanyanya kweGNU / Linux kwe2019
Semazuva ese, tinoita chinzvimbo che yakanakisa kugoverwa kweGNU / Linux kwe2019. Kunyangwe iwe uchitoziva kuti inyaya yekuravira uye zvido ... Izvo zvinofungwa nevamwe zvakanaka kune vamwe hazvina kunaka kudaro, asi chinhu chakanaka nezve kupatsanurwa uku ndechekuti panenge paine chero chinhu che chero kuravira. Uye kana zvisiri, saka unogadzira yako yega kugovera kubva pakutanga neepurojekiti seLinux Kubva kuKutanga, nezvimwe. Asi pane iyi sarudzo yeLxA, mukurumbira uye hunyanzvi zvinhu zvakatariswa.
Kuti ndiite sarudzo iri nani, ini ndakagadzira akati wandei akasiyana mapoka iyo yandakasarudza iyo inokunda distro yeiyo 2019. Nenzira iyi yakafara mitambo yevashandisi yakafukidzwa ndiani zvechokwadi achawana chavanofarira mukati meiyi sarudzo. Uye zvakare, ini ndakasanganisira mamwe mapoka ausingawanzo kuwana mune mamwe mablog, asi izvo zvinoita sezvakakosha kwandiri. Uye kana tataura izvozvo, isu tinoenda takananga kune zvikwata uye vanokunda, asi yeuka kuti iwe unogona kusiyira zvaunotaura kune wako waunofarira, nekuti ini ndinoziva kuti vamwe vanogona kusabvumirana zvizere uye vanozove nevavanoda ...
1 Kuparadzira kwakanyanya kwekushandisa kwese: Ubuntu
2 Kugoverwa kwakanyanya kwemitambo: SteamOS
3 Yakanakisa laptop distro: MX Linux
4 Kugoverwa kwakachengeteka zvakanyanya: Qubes OS
5 Yakanakisa isingaremi distro kune yekare Hardware: Puppy Linux
6 Kugoverwa kwakanyanya kuchengetedza zvakavanzika uye kusazivikanwa: TAILS
7 Kugoverwa kwakanyanya kwemafoni efoni: KDE Plasma Mobile
8 Kugoverwa kwakanyanya kwevagadziri: Ubuntu
9 Kugoverwa kwakanyanya kwemaseva: CentOS & Debian
10 Kuparadzira Kwakanyanya Bhizinesi: RHEL uye SLES
11 Kugovera kwakanyanya kugadzirisa: Arch Linux
12 Kugoverwa kwakanyanya kwevatangi: Linux Mint
13 Kuparadzira kwakanyanya kweGNU / Linux kweSBC: Raspbian OS
14 Kugoverwa kwakanyanya kwezvitupa:?
Kuparadzira kwakanyanya kwekushandisa kwese: Ubuntu
Imwe yeanonyanyo shandiswa distros uye iyo haigone kushayikwa mune chero chinzvimbo ndiUbuntu. Canonical's jewel yakazvisimbisa pachayo sekufarirwa nevakawanda. Chimwe chezvikonzero ndechekuti chinoita kuti Debian ive nyore uye ive neushamwari, asi kuchengetedza simba, kugadzikana, kuchengetedzeka uye kugadzikana kwechirongwa ichi.
Kuve wakakurumbira kwazvo, iwe uchawana akawanda mapakeji anowanikwa ayo, uye nharaunda hombe yevashandisi vanoda kubatsira, huwandu hwenzvimbo uye maitirwo pamambure ekukudzidzisa maitiro ekuita chero chinhu, nezvimwe. Naizvozvo, kwandiri ndiyo yekutanga sarudzo ingangoita chero mushandisi anoda kuyedza Linux uye ave nayo generic distro yechinhu chero chipi zvacho. Ndokunge, imwe nzira chaiyo kune Windows uye macOS.
Unogona kudhawunirodha iyi distro pawebhusaiti yepamutemo yeprojekti!
Kugoverwa kwakanyanya kwemitambo: SteamOS
Valve yakagadzira yayo SteamOS distro, zvichibva paUbuntu asi izvo zvinosanganisira akateedzana eakatanga madhiraivha eGPU uye imwe Hardware yemavhidhiyo mitambo. Ehezve, ine zvakare ine yakajairwa kusangana neiyo Steam mutengi. Saka unogona kunakidzwa nekutamba kubva pakutanga uye nezvakanakisa mhedzisiro.
Yakanakisa laptop distro: MX Linux
MX Linux yanga ichiwana mukurumbira nemakore. Iyo yakavakirwa pane antiX uye MEPIS chirongwa. Yakagadzirirwa kuve yakashongedzwa uye inoshanda maererano nekushandisa zviwanikwa, izvo zvinoita kuti ive sarudzo yakanaka yekuwana mashandiro akanaka uye nekuwedzera kuzvitonga palaptop yako.
Zvakare, iri distro nyore kumisikidza uye kushandisa, iyo inopa kuita kwakanaka kune vashandisi vayo. Kunyangwe iwe uri wekutanga, iwe unozviwana iwe wakasununguka mune ino ecosystem. Uye nharaunda yayo yakafara uye ine hushamwari kugadzirisa kusahadzika kwako uye matambudziko, kana ukasangana nechero ipi.
Kugoverwa kwakachengeteka zvakanyanya: Qubes OS
Qubes OS kugoverwa kweparanoid nezvechengetedzo, pamwe nevamwe vakaita saWhonix, nezvimwe. Icho chirongwa chatakataura nezvacho muLxA. Kuchengetedza iyo system, yakavakirwa pakuzviparadzanisa (fenzi), uchishandisa virtualization inoitwa kuburikidza neXen, ichipatsanura nharaunda dzakasiyana pamamishini chaiwo kuti udzivise mamwe marudzi ekurwiswa kana kudzikisira maitiro awo.
Yakanakisa isingaremi distro kune yekare Hardware: Puppy Linux
Puppy Linux ndeimwe yeklasiki kana zvasvika kunzvimbo dzakareruka uye kugona kuisa pamakomputa neyakare Hardware. NePuppy iwe unogona kuita kuti komputa yako imhanye zvisina kumboitika kana kukwanisa kumutsidzira zvekare macomputer awakasiya nekuti iwo anononoka nemamwe masisitimu anoshanda emazuva ano ... Inogona kuchengetwa mu100 MB chete uye inomhanya iine 64 MB chete ye RAM .
Kugoverwa kwakanyanya kuchengetedza zvakavanzika uye kusazivikanwa: TAILS
Miswe iwe unotoziva kuti ndiko kugovera kwaunogona kushandisa muLive mode kuti ufambe uye uite basa rako online pasina kusiya trace kana, asi, uchisiya zvishoma zvishoma sezvinobvira. Kuvandudzwa kwayo kwekuchengeteka, uye marongero aanopa nekutadza, vimbiso yekuti iwe unogona kuchengetedza zvakavanzika uye kusazivikanwa. Pasina kupokana, akanakisa pane izvi.
Kugoverwa kwakanyanya kwemafoni efoni: KDE Plasma Mobile
KDE Plasma Nhare Iyo inoshanda sisitimu yemidziyo yemafoni yaunofanirwa kuziva kana iwe uchida kuenda kubva kune yakasarudzika Android. Unogona kuiisa pane akasiyana kifaa mamodheru uye inopa yakanaka chiitiko. Ichokwadi kuti Ubuntu Touch zvakare chishamiso, uye ichiri chinyararire, asi ini ndakasarudza kuburitsa ichi chimwe chirongwa cheimwe maficha andinofarira zvakanyanya. Muenzaniso kugona kushandisa graphical nharaunda ine simba seKDE Plasma pane yako nhare.
Kugoverwa kwakanyanya kwevagadziri: Ubuntu
Canonical rutsigiro, rutsigiro rweiyi distro, uye ese maIDE, mapurogiramu maturusi, uye mamwe marongero ekuvandudza anowanikwa kune ino distro Ubuntu, ita kuti ive yakakwana kune aya mabasa. Vamwe, kune rumwe rutivi, vanosarudza vamwe vakaita seCentOS, Debian, Manjaro, Fedora kana Arch Linux.
Unogona kudhawunirodha iyi distro pane iyi link yandakasiya muchikamu chekutanga!
Kugoverwa kwakanyanya kwemaseva: CentOS & Debian
Iwe unotoziva kuti Fedora inopa nzira kune RHEL uye RHEL ku CentOS. Naizvozvo, neCentOS isu tine kugovera kunochengetwa nenharaunda, yemahara uye nezvakanaka zveRHEL sezvo iri bharogo forogo yaro. Saka kana iwe uchida kukwira sevha zvichibva paRPM package uye neSELinux, unofanirwa kusarudza CentOS.
Debian ndiye mumwe muvengi mukuru muchinhu ichi. Asi mune ino kesi, kune avo vanoda sisitimu iyo zvakare yakavimbika, yakachengeteka, yakasimba uye yakasimba, asi neDEB neAppArmor mapakeji senzira yekudzivirira yekusarudzika. Kwandiri pachangu, zvirinani kune manejimendi pane SELinux ...
Unogona kudhawunirodha iyi distro pa iyo yepamutemo webhusaiti yeiyo CentOS chirongwa! Kana iyo Debian Project!
Kuparadzira Kwakanyanya Bhizinesi: RHEL uye SLES
SUSE, pamwe neRed Hat (ikozvino kubva kuIBM), ndiwo maviri akasimba ma distros enzvimbo dzebhizinesi. Vaviri SLES naRHEL vane hondo yakaoma yekuve vatungamiriri mune ino chikamu. Ndeupi ari pachena anokunda? Zvakanaka, ndingati hapana imwe inogona kuwana yakananga korona, nekuti maturusi akasiyana nemasevhisi anopiwa anoita kuti rimwe nerimwe rive rakakosha uye, pamwe, rinofanirwa nerudzi rwekambani nemabasa ...
Unogona kudhawunirodha iyi distro pawebhusaiti yepamutemo yeprojekti! RHEL / SLES
Kugovera kwakanyanya kugadzirisa: Arch Linux
Arch Linux yakaoma kuisa, pamwe neGentoo uye Slackware, yakanyanya kuomarara. Saka inokodzera vashandisi vemberi sezvo zvinogona kuve dambudziko kune vanotanga. Asi mukudzoka, inopa zvisingaenzaniswi kugadzirisa uye kuchinjika. Naizvozvo, iwe unogona kuiumba iwe nekuda kwako "padyo" sekunge iwe urikugadzira yako wega distro kubva pakutanga.
Kugoverwa kwakanyanya kwevatangi: Linux Mint
Linux Mint ndechimwe chezvinhu zviri nyore kugoverwa kwemaNewbies, kunyange paine zvimwe zvaunogona kusarudza seimwe nzira kune ino kana usingaifarire (mumwe muenzaniso ungangove Ubuntu pachawo kana elementaryOS). Linux Mint ndeyemazuva ano inoshanda sisitimu, ine dhizaini yakanaka uye izere izere inoshamwaridzika newbies.
Kuparadzira kwakanyanya kweGNU / Linux kweSBC: Raspbian OS
Raspberry Pi Foundation yakagadzira yavo inonakidza Raspberry Pi SBC, asi zvakare yepamutemo Debian-based operating system. Unoziva chii Ndiri kureva Raspbian OS, iyo inoratidzwa seye yakanakisa "nzvimbo dzese" yekushandisa sisitimu yemhando iyi yemamaboardboard anodhura. Nekudaro, iwe unotoziva kuti kune mamwe akawanda, zvinoenderana nezvaunoda. Semuenzaniso, ungangoda kubatanidzwa zvirinani neKare, nezvimwe. Mune ino kesi, pamwe iwe ungazonyanya kufarira kuLakka, LibreELEC, nezvimwe.
Kugoverwa kwakanyanya kwezvitupa:?
Kana iwe uri kufunga kuita imwe mhando setifiketi senge iyo yeLinux Foundation kana LPI, zvirinani kuti iwe unamatire kune chaiwo kugoverwa. Icho chikonzero ndechekuti mazhinji ezvinyorwa zvezvitupa izvi zvinoreva kune mhando yekugovera. Semuenzaniso, mu LPIC zvitupa iwe uchawana misoro yekugadzirisa DEB uye RPM mapakeji, nevane mamaneja maneja emabhanari aya, asi kwete mamwe marudzi evamaneja senge pacman, portage, nezvimwe.
Kunze kwezvo, mune iyo nyaya ye LFCS uye LFCE zvitupa, ivo vanongokutendera iwe kuti uite bvunzo pamhepo pamwe nezvakasiyana zvekugovera. Nguva pfupi yapfuura vakabvumidza kuvhuraSUSE, Ubuntu, Debian, uye CentOS. Parizvino chete Ubuntu uye CentOS. Saka iwe unofanirwa kufunga izvi ... Zvirinani kuti iwe ujaire kune imwe yeiyo distros yauri kuenda kunotora bvunzo uye usazowana chero kushamisika.
Ndinovimba yakubatsira iwe kusarudza ramangwana rako GNU / Linux distro, iwe unotoziva kuti unogona siya zvaunotaura nemipiro yako. Ini ndinogara ndichizvitaura, asi ndinozvidzokorora zvakare, inyaya yekuravira uye Kune anoshamisa madhiri andakasiya kunze. Asi izvi hazvireve kuti ivo vakanyanya ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugovaniswa kwakanyanya kweGNU / Linux kwe2019
Mune mawonero angu Zorin os 15 iri nani sarudzo pane Mint kune vatsva. Iyo yakafanana zvikuru neWindows asiwo kuMac.Software yayo inogara iri kumusoro-ku-zuva (kwete Mint). Iyo inopa yakabhadharwa vhezheni, Yekupedzisira, nerutsigiro. Chekupedzisira chakachinjika zvakanyanya, ini ndakakwanisa kuiisa pakombuta inoshanduka (kwete Mint).
Rondedzero isina kushamisika, isina kuwedzererwa, yakajairika muzvinhu zvakafanana. Inogamuchirwa, inogara iine musiyano, ne 99% yevanhu vane njere.
Zvinotaridza kuti hapana kana mumwe wavo akaedza zvakadzika
Ini ndinobvumirana neUbuntu yenzvimbo yekumba, uye kune avo vanoda kuchekerera pane nguva dzose Arch.Pakati pavo vanobatanidza zvakanakisa zvepasi rose reLinux, imwe neimwe iine zvayakanakira nezvayakaipira.
Rakanakisa rondedzero, yakazara zvakakwana kupfuura zvakajairwa zverudzi urwu rwechinyorwa.
Ehezve, Fedora, RHEL, CentOS ... Ndiwo mukwikwidzi wakananga weDebian uye zvigadzirwa.
Fedora anoita basa rakakura uye ndiye akanakisa Gnome distro nerutsigiro rweWayland, asi mumaonero angu kune ruzhinji Ubuntu ndiyo yakajairika (inogara ichitaura nezve nharaunda nharaunda).
Pindura kuna F
Mario Maple akadaro
Ini ndinoshandisa Linux Mint neLinux Lite, ini ndinoshandisa imwe paLaptop uye imwe pane desktop, uye kana ndikakukorokotedza, ivo vakanaka kwazvo, Linux, ndinoida, ndinoifarira zvakanyanya, Tenda Mwari kune Linux.
Pindura kuna Mario Arce
Ubuntu, ini ndiri mushandisi uyo achangopinda muLinux nyika uye ini ndakada iyo yakazara interface uye chiyero chayo.
Yakawanda sei canonical inokubhadhara iwe kune ino positi. Ubuntu hwakaita kuti ndiseke.
Pindura kuna alvis
Ini handidziviriri chero munhu, asi mune izvo zvingave zvako zano?
Icho chokwadi chekuti KDE Neon haina kubatanidzwa chinoita kuti iyi runyorwa isanyanya kunyanyisa, hapana kana chimwe chazvo chinowirirana mukuita uye kugadzirisa, inotyisa posvo
KDE Neon anoyamwa nguva pfupi yadarika, ini ndinotenda chaizvo kuti havana kuzviisa pachinyorwa
Kune ari nyore linux mushandisi seni, ini ndinoshandisa Ubunto genome uye Linux Mint, ndakafarira chinyorwa uye ini ndichatanga kuyedza kurudyi-vanogamuchira vataurwa.
Ko zvakadini neSlackware? Ini ndichiri kuzvitora seimwe yenzira dzakatsiga uye dzandinofunga dzinofanirwa kutariswa sechibvumirano.
mumwe munhu anoshandisa yekutanga OS 5 zvakare sarudzo yakanaka.
Ndanga ndichiishandisa kwenguva yakareba uye haina kundishungurudza
Pindura kuna davidspz1989
Peter Reyes akadaro
Uye kupi Pop OS?
Ubuntu hwevagadziri? mX linux chete yemalaptop? Ini ndinobvumirana naArch uye neCentos, asi ini ndinofunga ubuntu hahuremekedze kutaura kuti ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo yekuvandudza. Ini ndinokudziridza zvakakwana muArch Linux futi, Ubuntu chimwe chinhu chakandipa dambudziko rakawanda kwenguva yakareba uye izvo ini handisi kuraira. Musoro weFedora neCentos zvirongwa zvinonakidza zvekufunga nezvazvo. uye MX linux inopa yakawanda yekutaura nezvayo zvakare kuve neyakareruka asi inoshanda distro yekuisa .deb mapakeji uye nekudaro nei usingave nzvimbo yekuvandudza.
Ini ndashandisa zvakati wandei kugoverwa kweGNU-Linux, asi chandinoda kupfuura zvese ndiLinux Mint, chimiro chayo chakanyatsojeka, asi kana ndaifanira kusarudza imwe ingadai iri Manjaro, Suse kana MXlinux.
Ndine runyorwa rwegumi akanakisa GNU-Linux distros (maonero) kukubatsira iwe kusarudza: https://lareddelbit.tk/2019/10/15/las-10-mejores-distros-gnu-linux-para-2020/
Iwe wakakanganisa mune iyo url, ini ndiri fan weiyo peji, iyo haisi domain yayo, iri: https://lareddelbit.ga/2019/10/15/las-10-mejores-distros-gnu-linux-para-2020/
Kwaziso kubva kuGuatemala
Pane chero chaicho chaicho kuIoT? Unogona here kuisa zvakanakisa muPentesting uye chengetedzo yakanangidzirwa kuEthical Kubiridzira? Ini ndinofunga ndiKali, asi ini handinzwisise zvakawanda nezvazvo futi. Kwaziso.
Ini ndinotarisira kupaza muLinux, uye ndanga ndichiverenga kune yakakura mhando; uye kuita kwakasiyana-siyana, ndipo pandakaverenga kuti inogona kuiswa pane mamwe mahwendefa; Mumwe munhu aigona kundiudza kuti ndeipi vhezheni yakanyanya kugadzikana, ini ndoda kuunza iyo asus transformer pad tf700t kuhupenyu ine vhezheni ye linux, ndinokutendai pamberi, kukwazisa kwakanaka
Tarisa tarisa, ndanga ndiri kutenderera kusvikira ndanetsana naDebian. Vakandiudza kuti Debian yaive yekufamba-nzira, uye nei zvirizvo. Kugadzikana, kusimba. Kuita. Iko hakuna ruvara.
Ndokumbirawo kuti ndide kuziva, iyo Linux yandaigona kushandisa yeAsus Transformer Pad TF700T piritsi, ndinokutendai zvikuru
Iyo nyowani Caliber ebook muoni. Ichi ndicho chiitiko changu